Etu esi enweta Windows Live Messenger na Windows 8.1 | Akụkọ akụrụngwa
Etu ị ga-esi laghachi Windows Live Messenger na Windows 8.1?
Na-adịbeghị anya melite nke Microsoft nyere na Windows 8.1 ewepụrụ ọtụtụ ihe ochie ochie na akpaghị aka, ọ bụ ezie na nkwa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ịnwa ịme ụfọdụ n'ime ha a ga-agbake na nsụgharị ha ndị ọzọ; Windows Live Messenger bụ ozi izipu ozi ọtụtụ mmadụ chọsiri ike inweta ọzọ na nsụgharị kachasị ọhụrụ na ọ dị nwute, a na-amanye ọtụtụ iji Skype kama.
Ndi choro nwere ọrụ Windows Live Messenger a ọzọ Ha gbalịrị ịchọ weebụ maka ụzọ ọzọ dị iche iche iji weghachite ngwá ọrụ a, na-achọta ihe ijuanya dị egwu ebe naanị ọrụ ndị ọzọ na-eji wụnye ọba akwụkwọ na ngwa ọrụ na-adịghị mma na ihe nchọgharị Internetntanetị. ihe dị nnọọ ka ihe anyị kwuburu na mbụ jụọ; ugbu a, anyị ga-enye gị azịza dị irè (na iwu) ka ị nwee ike nwee ọrụ izi ozi a na Windows 8.1.
1 Windows Live Messenger na ọchụchọ weebụ
2 Etu esi ebudata ụdị Windows Live Messenger ugbu a?
Windows Live Messenger na ọchụchọ weebụ
N'ihi na mkpa nke a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ anyị rụrụ a obere nnyocha na nke a ozi ngwa ngwa ọrụ, ebe mbụ malitere dị iche iche search maqbx chekwebe na kpọmkwem, ka Google.com; ebe ahu ka anyi debere dika isiokwu ọchụchọ maka "Windows Live Messenger", popping a ọtụtụ nke aro na nwere ihe ọ bụla na-eme na a iwu akụkụ ma kama, na-atọ ndị ọzọ ngwa na ọrụ. Anyị anaghị akwado ịkwado nke ọ bụla n'ime ha, ebe ha wụnye ngwa nke aka ha ma mesịa megharịa onye ọrụ na ibe weebụ adịghị mma.
Ọzọkwa, achọla engines ndị a na isiokwu «Windows Live Messenger maka Windows XP », dị ka nke a duziri gị na Microsoft Microsoft gọọmentị ebe ị ga-ebudata nsụgharị kachasị ochie nke ọrụ ozi ngwa ngwa a. Anyị emeela otu ihe ahụ ma anyị ahụla oge ochie na nke gwụchara, nke ị nwere ike ịmasị na onyogho na anyị ga-edebe obere n'okpuru.
N'ezie, anyị ga-ekwuru na ụdị a na-arụ ọrụ nke ọma, ọ bụ ezie ya na oke mmachi nke gha agha iwe mgbe ọ na-akparịta ụka na nke ọ bụla n’ime ndị anyị kpọtụrụ na ndị enyi.
Etu esi ebudata ụdị Windows Live Messenger ugbu a?
Ebumnobi nke isiokwu a bụ na ị nwere ike nwere ụdị nke ozi ngwa ngwa a dị ugbu a. Anyị ga-enye gị usoro dị mfe nke ga - eme ka ị gaa URL na iwu na ọrụ gọọmentị site na ebe ị nwere ike iru - budata ma wụnye Windows Live Messenger, niile na-eji Windows 8.1.
Ọ bara uru ịme echiche ikpeazụ banyere ihe anyị ga-akwado n'oge a, nke ahụ bụ na ọ bụ ezie na usoro ahụ anyị na-atụ aro ya maka Windows 8.1, I nwekwara ike iji otu maka nsụgharị ndị ọzọ tupu ya yana, na kọmputa 32-bit na 64-bit.
Malite Windows 8.1 sistemụ arụmọrụ gị na desktọọpụ.
Mepee ihe nchọgharị internetntanetị gị (ọ dịghị mkpa nke ị na-eji).
Na URL ụdị Google.com dị ka ọkacha mmasị gị search engine.
Tinye isiokwu: «Windows dị mkpa»N’etinyeghi ihe edere ma pịa ya entrar.
O doro anya na ị ga-ahụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nsonaazụ, na-ahọrọ (n'ozuzu) nke mbụ. N'ebe ahụ, ị ​​ga-ahụ obere nkọwa ebe ekwuru ya na Na-achọ ịga gọọmentị URL nke ọrụ a; ọ bụrụ na ịchọtaghị nsonaazụ ziri ezi anyị na-akwado ka ị pịa njikọ na-esonụ, nke ga - eduzi gị gaa na URL budata gọọmentị.
Onyogho na anyị enịm ke elu akụkụ bụ otu nke ị ga-ahụ, na-enwe na- pịa bọtịnụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-ekwu "budata ugbu a"; Mgbe ịmechara nbudata ahụ, ị ​​ga-agba ọsọ faịlụ ya, nke ga-etinye ngwa ole na ole na n'etiti ha, Windows Live Messenger n'ime sistemụ Windows 8.1 a.
Ozugbo ị banyere nzere (aha njirimara ma ọ bụ email na paswọọdụ), ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ uru niile Windows Live Messenger na-enye mgbe niile; Ugbu a enwere ike ịnwe oge ngwa ahụ na-atụ aro ka ị melite, Otu ihe ị ga - anabataghị n'ihi na site na nke a, ị ga - eme Skype ka ọ rụọ ọrụ n'ụzọ ụfọdụ na kọmputa gị na Windows 8.1.
Anyị na-akwado ka ị gaa na njikọ ndị a, ebe anyị bịara ịtụ aro ozi dị mkpa banyere otu ị ga - esi debe ụdị Windows Live Messenger a na - enweghị ike imelite ya dịka Microsoft tụrụ aro. Must ga ozugbo Gaa na njikọ ndị a iji nweta patch chọrọ na ị ga-eme ya n'oge a. Site na mpempe akwụkwọ a dị mfe, ị ga - enwe aghụghọ nke ga - edobe ozi izipu ozi arụnyere na kọmputa gị ogologo oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Etu ị ga-esi laghachi Windows Live Messenger na Windows 8.1?
Nwannem i meela ihe a, na i kwuru eziokwu, abum otu n'ime ndi chere na ha maara WLM interface, Chukwu gozie gi. Kpachara anya 😉
Paco bọlbụ dijo
Enweghị ụzọ isi mee ya.
Zaghachi Paco bombilla
Otu esi tinye njikọ Internetntanetị abụọ na otu kọmputa